कोभिड भ्याक्सिनको अनुभव « हातमा खबर-जहाँ तपाइँ, त्यहीं खबर
कोभिड भ्याक्सिनको अनुभव
प्रकाशित मिति : २०७७, २८ पुष मंगलवार २३:५३
हिजो साँझ पहिलो डोज लगाइयो ! पाखुरा दुःखेर एक रात अनिदोजस्तो बित्यो ! कोभिड़-भ्याक्सिन नयाँ भए पनि यसको प्लेटफर्म र प्रविधि निकै पुरानो, परीक्षित र विश्वसनीय भएकाले कुनै धक भएन । उसो त भ्याक्सिनले मान्छेलाई गोही बनाउँछ भन्नेजस्तो ‘एन्टी-भ्याक्सिन भावना’ मान्छेमा जहिले पनि हुने रहेछ । र, यस्तो धारणा राख्नेले जुन समयमा पनि केही मान्छेलाई बहकाउने रहेछन् । उदाहरण म आफै हुँ ।
भ्याक्सिनका यस्तै व्याख्या पत्याएर मेरा अभिभावकले मलाई कुनै पनि खोप दिनुभएको रहेनछ । धन्न कुनै दुर्घटना भएन । बेलायत आइसकेपछि जागीर खोज्ने क्रममा गरिएका परिक्षणपछि बल्ल यो नोटिस भयो । केही खोप यो उमेरमा पनि दिन मिल्ने रहेछ, केही सधैँका लागि छुटेछ ।
यो थपुवा है भ्याक्सिन तेस्रो चरणको ट्रायलमा पुगेपछि भयङ्कर नाफ़ा हुने आशामा फाइजरको अलिकति शेयर किनिएको थियो । तर, सोचे जति बढ़ेन । दुई-तीन कारण मुख्य रहेछन्:
१-महामारीभरि ‘उल्लेख्य’ नाफ़ा लिएर बेच्न नैतिक सङ्कट भएकाले आर्थिक रूपमा भ्याक्सिन-सेलले ठूलो फरक नपर्ने रहेछ ।
२-दुई सय खर्बभन्दा ठूलो मार्केट क्याप रहेको कम्पनीमा ३-४ खर्बको भ्याक्सिन सेलले खास फरक नपर्ने रहेछ । रिभेन्यु बढ़े पनि मार्जिनमा प्रेसरले गर्दा नेट प्रोफिट उकालो नलाग्ने रहेछ । अहिले पनि कम्पनीको आम्दानी र शेयर मूल्यको अनुपात (PE ratio) औसतभन्दा धेरै छ ।
३-यी सबैभन्दा मुख्य कुरो, कोभिड़ भ्याक्सिनका लागि कम्पनीका ल्याब, वैज्ञानिक र साधनस्रोत खर्च भएपछि पाइपलाइनमा भएका अन्य प्रोजेक्ट प्रभावित हुने रहेछन् । यसले कम्पनीको ओभरल ग्रोथमा असर पर्ने नै भयो । आज मार्केट खुलेपछि बेच्ने निर्णय गरियो ।
प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाले पार्ने तीनवटा दूरगामी असर
सुरेश आचार्य । सर्वोेच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्ने फैसला गरेकोमा लोकतन्त्रमा फैसलाको विरोध
आफैंले निकम्मा भनेको संसदमा उनी कुन मुख लिएर विश्वासको मत लिन जालान् ?
नारायण गाउँले । बा अलि लिच्चड़ नै रहेछन् ! प्रष्ट रूपमा आफ्नो एजेन्डा
सत्तामा दाह्रा नङ्ग्रा गाडेर बस्ने र चुनाव गराउन खोज्ने अनैतिक भ्रष्ट नेतालाई अब रोक्नैपर्छ
भीम उपाध्याय । चुनाव त हुनेछ अब तर नयाँ सरकार गठन भएर संसदको
फैसलालाई केवल भर्याङ्ग नहेरियोस्
डा. युवराज संग्रौला । प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापित हुँदैमा धेरै ठूलठूला गफ गर्नुको तुक छैन